Mirissa, ebe whale dị na Sri Lanka | Akụkọ Njem
Ga - achọ ịhụ dolphins, whale na anụ ụlọ ndị ọzọ na ebe obibi ha: oke osimiri? Ọ bụrụ otu a, ị gaghị echefu ya Osimiri mirissa, site na Sri Lanka, otu n'ime ihe ndị mara mma - nke ọtụtụ ndị weere na ọ kachasị - nkuku nke mba ahụ.
Mirissa, ebe nsọ whale, dị na nsọtụ ndịda nke agwaetiti ahụ, naanị ihe dịka 200km site na ikuku. Osimiri a dịpụrụ adịpụ bụ nke a ihe ùgwù, ebe i nwere ike izuike ma chefuo ihe niile na-eme mgbe ndụ gachara. Ihe ndị njem niile na-eme njem puku kwuru puku kilomita site n'akụkụ ụwa niile na-achọ ịla n'iyi na ebe a.
Ikiri whale na dolphins na-egwu mmiri na Mirissa nso bụ otu n’ime ọrụ mmiri na-atọ ụtọ enwere ike ịme na Sri Lanka n’oge ezumike, maka na nke a bụ otu n’ime ebe kachasị mma n’Oké Osimiri India, na ikekwe ụwa, ebe anụmanụ ndị a. ka mma ahuru.
N’ebe a anyị ga-ahụ whale na-acha anụnụ anụnụ, whale Bryde, sperm whale, fin whale, na ọtụtụ ụdị dolphins dị iche iche. Na mgbakwunye, ebe a ị nwekwara ike ịhụ mbe na ọtụtụ ụdị azụ dị iche iche, dịka tuna tuna na azụ na-efe efe. Oge nkiri whale na Mirissa na-amalite na Nọvemba wee gwụ n'April, n'oge oge kachasị ekpo ọkụ, oge okpomọkụ austral. Gbọ mmiri ndị ahụ na-apụ n'isi ụtụtụ, ebe ọ bụ n'ehihie ọ na-esiri ike ịhụ ndị nnụnụ ahụ, ha na-anọkwa ihe dị ka awa anọ.
1 Otu esi enweta Mirissa?
2 Enwere ụlọ obibi na Mirissa?
3 Ebe iri nri dị ọnụ ala na Mirissa?
4 Kedu ihe ị ga-eme na Mirissa?
5 Mirissa, ebe nsọ whale
Otu esi enweta Mirissa?
Iji rute n'ụsọ osimiri mara mma maka ndị njem nleta, ị ga-ahapụ obodo Tangalle wee gawa Mirissa. Usesgbọ ala na-eburu gị si n’otu ebe ruo ebe ọzọ kwa ụbọchị, yabụ na ị gaghị enwe nsogbu ịrute ebe ahụ. N'ezie, ọ dị mkpa ka ị mara nke ahụ njem a were ihe dị ka awa abụọ, ya mere echefula iwere ezigbo akwụkwọ, ma ọ bụ ihe omume ntụrụndụ ọzọ ka nkeji wee gafere ọsọ ọsọ.
Enwere ụlọ obibi na Mirissa?
N'ezie. N'ịbụ ebe pụrụ iche maka ndị ọbịa, enweghị ụkọ ebe ịnọ, ma n'okporo ụzọ ma n'akụkụ osimiri. Ahịa nwere ike ịdị iche dabere na ọnụọgụ ndị njem, mana n'ozuzu ọ dị oke ọnụ ala.
Accommodlọ ndị dị n'okporo ụzọ bụ ndị dị ọnụ ala (ha nwere ike iri 800 rupees Hindu, nke ruru ihe dị ka euro 11) mana ọ bụrụ na ịnwere ike izere ha, ị ga-enwe ọ enjoyụ njem gị karịa, ebe ọ bụ na ebe a na-eme mkpọtụ.
Ka ịchọta ebe dị mma, ị ga-agrịrị n’ebe ugwu, n’akụkụ ụsọ oké osimiri. N'ebe ahụ maka 1000 rupees (euro 13,30) ị nwere ike ịnwe ụlọ dị mma, nwere ime ụlọ ịwụ, wifi, ime ụlọ ịwụ na mmiri ọkụ, ma karịa, dị ọcha. N'ịbụ ndị dịpụrụ adịpụ n'okporo ụzọ, ikuku dị jụụ. Ihe bụ ihe ọzọ, ị ga-anọ ezigbo nso n'akụkụ osimiri ahụ dị ebube.
Ebe iri nri dị ọnụ ala na Mirissa?
Tupu ma ọ bụ mgbe ị gachara ịhụ otu n'ime nlegharị anya mara mma na Sri Lanka, Kedu ka anyị ga-esi meju afọ anyị? Nke bụ eziokwu bụ na Mirissa enweghi ọtụtụ ebe ị ga-eri, belụsọ maka ọtụtụ ụlọ mmanya ị ga-ahụ n'ụsọ osimiri, mana enwere ụfọdụ.
N'okporo ụzọ ahụ enwere ụlọ nri abụọ, ebe ị nwere ike ịtụ nri dị iche iche na ọnụahịa ịtụnanya: ihe dị ka rupees 200 (ihe dị ka euro 3). Ọ na-adọrọ mmasị, ọ bụghị ya? Naanị ihe bụ na ọ bụrụ na ịchọrọ ị drinkụ biya, ị ga-echere iji rute n'ụsọ osimiri Mirissa, ebe ọ bụ na ha na-ejere ya ozi ebe ahụ, yana n'ụzọ, dịkwa oke ọnụ ala: ihe dị ka euro 2.
Kedu ihe ị ga-eme na Mirissa?
Mgbe ị gara ọmarịcha ebe ebe okpomọkụ, enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme. Can nwere ike iri uru nke lee ka efu mmiri nke ụgbọ mmiri Sry Lanka nwere, Mee sọfụ, azu, gaa snọkpụ na mmiri n'azụ agwaetiti ma ọ bụ rigo na temple Buddhist.
Mirissa, ebe nsọ whale
Mana ọtụtụ ndị njem na-eme njem ebe a na-eme ya n'ihi otu ihe naanị: lee whale na ndị ọzọ na-anụ ọhịa n'ọhịa. Njegharị ahụ na-efu ihe dị ka 3000 rupees (euro 40), wee dị n’agbata awa 3 na 4, ọ bụ ezie na ị nwere ike ịchekwa 500 rupees ma ọ bụrụ na ịzụta tiketi gị ozugbo n’ọdụ ụgbọ mmiri.
Ọnụ ọgụgụ gara nke ọma, ya bụ, ohere ịchọta cetacean dị oke elu, 95%. Imirikiti oge a na-ahụ ha n'isi ụtụtụ, ugbua n'ụsọ osimiri, mana oge ndị ọzọ anyị nwere ike nwee ndidi karịa. Ihe niile ga-adabere n’igide ụmụ anụmanụ ndị a ịga ịchọ nri.
Ha na-apụ n'isi ụtụtụ ma laghachi n'ehihie, oge na i nwere ike iri uru nke rie ezigbo efere osikapa na curry.
Yabụ ugbu a ịmara, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ ahụmịhe a na-agaghị echefu echefu, na agwaetiti nwere ihu igwe na-anụ ọkụ na anụ ọhịa, gaa ịzụta tiketi gị na Sri Lanka, na ị ga-ahụ otu egwuregwu ị nwere 🙂.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Sri Lanka » Mirissa, ebe whale dị na Sri Lanka
Oke osimiri iri kacha adọrọ mmasị n'ụwa (II)